i-England ihlula amaProteas women ukungena kwi-final yomqhudelwano wendebe yomhlaba
BRISTOL, ENGLAND - JULY 18: Heather Knight of England(C) celebrates the wicket of Laura Wolvaardt of South Africa during the ICC Women's World Cup 2017 Semi-Final match between England and South Africa at The County Ground on July 18, 2017 in Bristol, England. (Photo by Harry Trump-IDI/IDI via Getty Images)
i-England ihlule amaMomentum Proteas ngama-wicket amabili kumdlalo we-semi-final oshisayo ophele nge-over yokugcina e-Bristol ngoLwesibili. Iqembu lasekhaya lizodlala iqembu elinqobayo kwi-semi-final yesibili phakathi kwe-India ne-Australia e-Lord’s ngeSonto.
i-South Africa imiswe kuma-runs angu-218/6 ekupheleni kwe-innings yabo emuva kokunqoba i-toss kanye nokukhetha ukushaya kuqala. Abadlale kakhulu kube u-Mignon du Preez (76*) no-Laura Wolvaardt (66), o-50 babo bafike ngesikhathi abashaya kakhulu, u-Lizelle Lee (7), ukapteni uDane van Niekerk (27) no-Chloe Tryon (1).
Owokuqala kube u-Lee, okhishwe u-Anya Shrubsole (1/33) kwi-over yesithupha. Ashaya naye, u-Wolvaardt no-Trisha Chetty bahlanganise ama-runs angu-27 nge-wicket yesibili ngaphambi kokuthi aphume u-Chetty enama-runs angu-15, kushaywa ama-wicket emuva kokuthi kuphose u-Natalie Sciver.
u-Wolvaardt no-Mignon du Preez bayibuyise kahle i-innings, bahlanganisa i-partnership yama-runs angu-77 nge-wicket yesithathu ngaphambi kokuthi kuphume umdlali omncane ngesikhathi ekhishwa u-Heather Knight (1/8) nge-over yesi-32. u-Marizanne Kapp uhlale amabhola amabili ngenxa yokungazwani phakathi kwakhe no-Du Preez, uphume eno-1.
u-Van Niekerk ushaye ama-runs angu-21 emabholeni angu-25, kodwa okunye ukungezwani no-Du Preez kubone ukapteni ephuma nge-run-out kwi-over yesi-42. u-Chloe Tryon ulandelile emabholeni amabili ngesikhathi elishayela ezandleni zika-Jenny Gunn omphoselile ibhola.
u-Du Preez no-Suné Luus (21*) balungise isimo ngokuhlanganisa ama-runs angu-48 emabholeni angu-47, bayiqeda kahle i-innings.
AmaProteas azoba owokuqala ukuvuma ukuthi bashodelwe ama-runs angu-30 bengena kwi-innings ye-England, kodwa ukuhlasela ekuqaleni kwa-Ayabonga Khaka kunike izivakashi ithemba ekuqaleni. i-right-armer ikhiphe abavula umdlalo u-Lauren Winfield (20) no-Tammy Beaumont (15) kuma-overs esishagalolunye neyesi-13.
i-England ibikukeka iqenqeleza ku-139/2 nge-over yesi-33. Bekunama-extra angu-25, okubalwa khona ama-wide angu-17 nama-no balls amathathu okubasizile, kodwa amaProteas aqale ukuhlasela. u-Sarah Taylor oyingozi uphume nge-run-out ekhishwa u-Van Nekerk eno-54 kwi-over yesi-33, kwalandela umlingo ka-Luus, okhiphe u-Heather Knight no-Natalie Sciver ngo-30, belandelana. u-Katherine Brunt ungene ngesikhathi iqembu lakhe liku-145/5 futhi washaya ama-runs angu-12 ngaphambi kokuthi akhishwe u-Moseline Daniels okubona iqembu lasekhaya liku-173/7.
u-Fran Wilson no-Jenny Gunn ulethe isithunzi kwi-innings, banezezela ngama-runs angu-40 nge-wicket yesikhombisa. u-Gunn uhlanganise ama-runs angu-27 emabholeni alinganayo, kwathi u-Wilson wahlanganisa ama-runs angu-30 emabholeni angu-38 ukusondeza iqembu labo. u-Marizanne Kapp uqede imisebenzi yabo nge-over yesi-48, esusa u-Wilson futhi udweshu lwaqhubeka ngesikhathi u-Shabnim Ismail ekhipha u-Laura Marsh i-England idinga ama-runs amabili emabholeni amathathu okugcina. Kodwa ekugcineni, isipiliyoni sika-Shrubsole sishaye u-four ngebhola lokuqala ukunobisa iqembu lakhe.
u-Van Niekerk, nokho ephoxekile ngokuhlulwa, uyaziqhenya ngeqembu ngokufika kuma-semi-final kanye nendlela abakunqoba ngayo lokho.
“Siphatheke kabuhlungu okwamanje, kodwa ngiyaziqhenya ngokweqile ngaleliqembu,” kusho uVan Niekerk. “Ukufika lapha futhi singadluleli kwi-final kubuhlungu ngoba ngiyazi kunabanye ukuthi basebenze kanzima kakhulu ukufika lapha nokuthi besikufuna kangakanani. Sazibekela umphumela eminyakeni emine edlulile ukuthi kulomqhudelwano sizongena kuma-semi-final futhi sakwenza lokho, kodwa bekuzoba kuhle ukube siphumelele ukudlala kwi-final ngosuku oluhle njenge-Mandela Day kanye nowethu, u-Aya Khaka ezalwa.”
“Ukusekelwa okuphuma kubantu ekhaya bekumangalisa futhi ngifuna ukubonga wonke umuntu ozosondeze kithina futhi wakhombisa ukuseseka, ikakhulukazi abaxhasi bethu, i-Momentum ne-Cricket South Africa. Sifisa sengathi besingabenzela, kodwa singathatha ukwazi ukuthi kwindebe yomhlaba elandelayo, sinekhono kanye nokwazi ukuhamba size sifike kwi-final. Sithemba ukuthi siyijabulisile i-South Africa.”
Imininingwane yohambo izokhishwa maduzane.
iCSA incoma amaMomentum Proteas ngomqhudelwano wawo wendebe yomhlaba ongakhohlakali AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando u-Luus ubheka okuhle ngaphambi kwe-semi-final yamaProteas esifazane Australia iqhubeka nokungahlulwa ibhekene ne-South Africa AmaProteas abesifazana alungele umdlalo ne-Australia uMoreeng ujabuliswa okunqotshwe amaProteas abesifazane okwamanje uVan Niekerk no-Ismail bayaqhakaza njengoba amaProteas esifazane afinyelela kuma-semi-final endebe yomhlaba AmaProteas esifazane abheke ukusondela kuma-semi endebe yomhlaba Yonke imidlalo kumele siyinqobe – uDu Preez uBeaumont no-Taylor banqobisa i-England ngokushaya Wonke umuntu usendaweni enhle ngaphambi kwe-England – uChetty